箴言 26 CCB – Mmebusɛm 26 AKCB | Biblica
箴言 26 CCB – Mmebusɛm 26 AKCB
1Sɛnea sukyerɛmma te ahuhurubere anaasɛ osu wɔ otwabere no,
saa ara na anuonyam mfata ɔkwasea.
2Sɛnea apatuprɛw tu anaasɛ asomfena tu dannan ne ho no,
saa ara na nnuabɔ hunu nsi hwee.
3Ɔkafo abaa wɔ hɔ ma ɔpɔnkɔ, nnareka wɔ hɔ ma afurum,
na abaa wɔ hɔ ma nkwaseafo akyi.
4Nhwɛ ɔkwasea agyimisɛm so mma no mmuae,
anyɛ saa a wo nso bɛyɛ sɛ ɔno.
5Gyina ɔkwasea agyimisɛm so ma no mmuae,
anyɛ saa a ɛbɛyɛ no sɛ onim nyansa.
6Sɛ wode nkra bi soma ɔkwasea a,
ɛte sɛ wutwitwa wʼankasa wʼanan anaasɛ wonom awuduru.
7Apakye nan a awu na ɛsensɛn hɔ no,
yɛ mmebusɛm a ɛda ɔkwasea ano.
8Ɔbo a wɔakyekyere afam ahwimmo so
te sɛ anuonyam a wɔde ama ɔkwasea.
9Nsɔe dua a ɔkɔwensani kita no
te sɛ mmebusɛm a ɛda ɔkwasea ano.
10Nea ɔbɔ ɔkwasea anaa obi hunu paa no
te sɛ agyantowni a opira nnipa kwa.
11Sɛnea ɔkraman san kɔ ne fe ho no,
saa ara na ɔkwasea ti nʼagyimisɛm mu.
12Wuhu obi a ɔyɛ onyansafo wɔ nʼankasa ani so ana?
Anidaso pii wɔ ɔkwasea mu sen no.
13Ɔkwadwofo ka se, “Gyata wɔ ɔkwan no mu,
gyatakeka nenam mmɔnten no so!”
14Sɛnea ɔpon di akɔneaba wɔ ne mpontare so no,
saa ara na ɔkwadwofo twa ne ho wɔ ne mpa so.
15Ɔkwadwofo de ne nsa si aduan mu,
na ɛyɛ no anihaw sɛ obeyi akɔ nʼano.
16Ɔkwadwofo yɛ onyansafo wɔ ɔno ankasa ani so
sen nnipa baason a wodwen asɛm ho na wɔabua.
17Obi a oso ɔkraman aso twe no no
te sɛ obi a ɔretwa mu na ɔde ne ho kɔfra ntɔkwaw a ɛmfa ne ho mu.
18Ɔbɔdamfo a ɔtotow atuo
anaa agyanwerɛmfo no
19te sɛ obi a, ɔdaadaa ne yɔnko
na ɔka se, “Na mede redi agoru!”
20Nnyansin hi a ogya dum;
nseku nni hɔ a ntɔkwaw to twa.
21Sɛnea gyabiriw dan nnyansramma na nnyina dan ogya no,
saa ara na ɔtɔkwapɛfo hyɛ ntɔkwaw mu takramugya.
22Osekuni ano asɛm te sɛ aduan a ɛyɛ dɛ;
ɛhyɛnhyɛn onipa akwaa mu nyinaa.
23Sɛnea ama kata asankagow ho no
saa ara na tɛkrɛmadɛ kata amumɔyɛ koma so.
24Onipa bɔne kasa te sɛ nea oye,
nanso nnaadaa ahyɛ ne koma ma.
25Ɛwɔ mu sɛ ne kasa yɛ dɛ de, nanso nnye no nni,
efisɛ abususɛm ason ahyɛ ne koma ma.
26Ebia nnaadaa bɛkata nʼadwemmɔne so,
nanso nʼamumɔyɛsɛm bɛda adi wɔ bagua mu.
27Sɛ onipa tu amoa a, ɔbɛtɔ mu;
sɛ onipa pirew ɔbo a, ɛbɛsan aba no so.
28Atoro tɛkrɛma kyi wɔn a ogu wɔn ho fi,
na adɛfɛdɛfɛ ano de ɔsɛe ba.
AKCB : Mmebusɛm 26